Manchester City oo garoonkeeda Etihad guul kaga gaartay kooxda West Ham… +SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 27 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City oo garoonkeeda Etihad guul kaga gaartay naadiga West Ham United, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Manchester City iyo West Ham United ku kala sasteen barbardhac 1-1 ah
Daqiiqadii 30-aad kooxda Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Ruben Dias, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Kevin De Bruyne.
Laakiin 43 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda West Ham United ayaa la timid goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Michail Antonio oo caawin ka helay saaxiibkiis Jesse Lingard.
Daqiiqadii 68-aad markale Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii 2-1 ka dhigay John Stones, waxaana caawinta goolkan lahaa Riyad Mahrez.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Manchester City kaga adkaatay kooxda West Ham United oo marti ugu aheyd garoonka Etihad, City ayaa haatan 13 dhibcood ka sareysa Manchester United oo booska labaad kaga jirta kala sareynta horyaalka.